Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Nahazo ny fiaramanidina Airbus A330neo voalohany Air Air
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Belzika • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • fampiasam-bola • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News
Ny Air Belzika dia mahazo ny jet A330neo voalohany
Ny A330neo Family no A330 taranaka vaovao; izy io dia miorina amin'ny toekarena voaporofo, fahaiza-miasa ary fahatokisana ny A330 Family, ary mampihena ny fanjifana solika sy ny famoahana CO2 manodidina ny 25 isan-jato.
Ny Air Belzika dia hametraka ny fiaramanidina amin'ireo zotra mampitohy an'i Bruxelles amin'ny toeran-kaleha lavitra.
Ny fiaramanidina dia namboarina miaraka amin'ny seza 286 ao anaty lamina misy kilasy telo - kilasy fandraharahana lainga 30 miadana, kilasy premium 21, ary seza sokajy toekarena 235.
Ny seza rehetra dia miaraka amin'ny rafitra fialam-boly farany, Wi-Fi an-tsambo ary hazavana amin'ny toetr'andro.
Air Belzika, ny mpitatitra seranan-tsambo iraisam-pirenena miasa any Mont-Saint-Guibert any Belzika, no nitondra ny voalohany amin'ny A330-900 roa.
Ny fiaramanidina dia namboarina miaraka amin'ny seza 286 ao anaty lamina misy kilasy telo (kilasy fandraharahana lainga 30 miadana, kilasy premium 21, ary seha-pianarana toekarena 235). Ny fiaramanidina dia miaraka amin'ny Airbus Toeram-pivoahana amin'ny habakabaka. Ny seza rehetra dia miaraka amin'ny rafitra fialam-boly farany, Wi-Fi an-tsambo ary hazavana amin'ny toetr'andro.
Misaotra ireo teknolojia farany an'ny A330neo, Air Belzika dia handray soa amin'ny vahaolana fiaramanidina mahomby sy mahomby amin'ny tontolo iainana, sady manome fenitra fampiononana tsara indrindra ho an'ny mpandeha ao amin'ny cabine mangingina ao an-dakilasy. Ho fanampin'izany, ny tabataba ambany sy ny fandefasana entona ampitahaina amin'ny fiaramanidina taloha dia mahatonga ny A330neo ho mpifanolobodirindrina kokoa amin'ny seranam-piaramanidina.
Air Belzika hametraka ny fiaramanidina amin'ny zotra mampitohy an'i Bruxelles amin'ny toeran-kaleha lavitra.
Ny mpitatitra Belzika dia miasa ankehitrinyAirbus andian-tafika marobe izay misy A330-200F sy A340-300; ny A340s dia hosoloan'ny A330neos tsikelikely.
Ny A330neo Family no A330 taranaka vaovao; izy io dia miorina amin'ny toekarena voaporofo, fahaiza-miasa ary fahatokisana ny A330 Family, sady mampihena ny fanjifana solika sy ny CO 2 fandefasana entona manodidina ny 25 isan-jato eo ho eo raha ampitahaina amin'ny fiaramanidina taloha, mpifaninana ary manome fahaiza-manao tsy manam-paharoa. Ny A330neo dia mandeha amin'ny alàlan'ny maotera Trent 7000 an'ny Rolls-Royce farany ary manana elatra vaovao miaraka amin'ny elatra mihamitombo sy elatra fitambarana ho an'ny aerodinamika mandainga kokoa.
Miaraka amin'ny boky fandefasana fiaramanidina mihoatra ny 1,800 avy amin'ny mpanjifa 126 tamin'ny faran'ny volana septambra 2021, ny A330 dia mijanona ho fiaramanidina fianakaviana malaza indrindra amin'ny fotoana rehetra.
Toerana tsara indrindra ho an'ireo tia Architecture Classic
Inona no atao hoe Chief Activity Officer? 52 Wyndham Resorts...